Football Khabar » युरो कप छनौट : पोर्चुगलको शानदार जितमा रोनाल्डो एक्लैको ४ गोल !
युरो कप छनौट : पोर्चुगलको शानदार जितमा रोनाल्डो एक्लैको ४ गोल !
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै एक्लैले ४ गोल हानेपछि पोर्चुगलले युरो कप छनौटमा फराकिलो जित निकालेको छ । नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको तेस्रो छनौट खेलमा कप्तान रोनाल्डोको शानदार प्रदर्शन गर्दै ४ गोल गारेपछि पोर्चुगलले लिथुनियालाई उसकै घरमा १–५ ले हरायो ।
पोर्चुगललाई खेलको सातौं मिनेटमै रोनाल्डोले पेनाल्टी गोलबाट अग्रता दिलाएका थिए । बक्समा लिथुनियाका खेलाडीले ह्यान्ड बेल गरेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा रोनाल्डोले कुनै गल्ती नगरी गोल गरेका थिए । रोनाल्डोको सो गोल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ९०औं गोल थियो ।
तर, खेलको २८औं मिनेटमा लिथुनियाले गोल फर्कायो । उसका लागि कर्नर किकमा भ्याटाउटासले हेडिङ गोल गर्दै खेल १–१ बनाएपछि पहिलो हाफ बराबरीमा सकियो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा पोर्चुगलले लगातार गोल हान्यो । दोस्रो हाफ रोनाल्डोका लागि विशेष रह्यो । उनले १५ मिनेटको बीचमा ३ गोल हाने खेलको ६१औं मिनेटमा उनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा ६५औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे । उनको ह्याट्रिक गोल निकै आकर्षक थियो । बर्नान्डो सिल्भाको पासमा उनले वान टचमै गोल गरेका थिए ।
उनको दोस्रो गोल लिथुनियाका गोलकिपरको गल्तीले लागेको थियो । रोनाल्डोको कडा प्रहार उनले रोक्न खोज्दा आफ्नै शरीरमा लागेर पोस्टमा छिरेको थियो ।
त्यसपछि रोनाल्डोले खेलको ७६औं मिनेटमा व्यक्तिगत चौथो गोल गरे । सो गोल पनि उनले सिल्भाको क्रस पासमै बडा सुन्दर प्रहारमा गरेका थिए । त्यसपछि रोनाल्डोलाई सब्सिच्युट गरियो । त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा विलियन कार्भाहालोले गोल गरेपछि खेल पोर्चुगलले १–५ ले जितयो ।
अब यो जितपछि पोर्चुगल समूह ‘बी’मा ८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ । एक खेल बढी खेलेको युक्रेन १३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २४ भाद्र २०७६, मंगलवार २०:३१